Dibad-baxyo waa weyn oo weli ka socda Myanmar
Tobanaan kun oo qof ayaa Axadda maanta ah isugu soo baxay Myanmar, tani oo ah maalin ka mid ah maalmaha la qabtay bannaanbixii ugu weynaa ee lagaga soo horjeedo afgambigii bishii hore, xilli ciidamada amnigu ay habeenkii xalay magaalada Yangon ku weerareen hogaamiyaasha ololaha iyo kuwa mucaaradka.
Booliska ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa iyo bambooyin mudaahadaraadayaasha looga argagixiyo ku tuuray magaalada Lashio ee gobolka waqooyiga ee Shan, sida uu muujiyay muuqaal toos ah oo lagu baahiyay Facebook. Qof goobjooge ah ayaa sheegay in booliisku ay fureen rasaas si ay u kala eryaan dibadbax ka socday magaalada taariikhiga ah ee Bagan, laakiin ma cadda in ay adeegsadeen rasaasta cinjirka ah ama rasaasta nool.
Ma jiro wax war ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay rabshadaha. Dibadbaxyada ka socda magaalooyin dhowr ah ayaa ahaa kuwa nabdoon.
Bannaanbaxa ugu weyn ayaa ka dhacay magaalada labaad ee Myanmar, Mandalay, halkaas oo dhaqdhaqaaqayaashu ay sameeyeen mudaharaad fadhi ah ka dib labo daqiiqo oo aamusnaan ah oo lagu maamuusayay dadka ay dileen booliska iyo ciidanka militarigu.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ciidamada amniga ay dileen dad ka badan 50 qof si ay u joojiyaan banaanbaxyada iyo weerarada maalinlaha ah ee ka dhacayay dalkaasi ku yaalla Koonfur Bari Aasiya tan iyo -1-dii February oo ay militarigu afgenbiyeen hogaamiyihii la doortay, Aung San Suu Kyi.